Esikhathini sethu, lenqwaba abantu engezwani. Abakwazi avele ngezindlela ezahlukene kakhulu. Umuntu oqala rhinitis eside, umuntu ehlupheka ukuqubuka wonke umzimba, futhi umuntu akakwazi ukubhekana ukukhwehlela kwakhe. Izidakamizwa ngokumelene nalesi sifo, kunezindlela eziningi, zonke zibe izici zabo kwesicelo nokubonakaliswa ukusetshenziswa. Enye yalezi izidakamizwa "Alerzin". Ukufundiswa enamathiselwe nalokho, inikeza incazelo eningiliziwe izimpawu kanye contraindications.
"Alerzin" itholakala amafomu amabili umthamo amaphilisi kanye amathonsi. Uma sicabangela iconsi ke 1 ml izidakamizwa zihlanganisa:
5 mg levocetirizine dihydrochloride - lena isithako esikhulu.
Njengoba izinto asizayo yilezi: 85% glycerol, saccharin sodium, propylene glycol, sodium acetate trihydrate, propyl parahydroxybenzoate, glacial acetic acid, methyl parahydroxybenzoate, amanzi ahlanzekile.
1 tablet iqukethe 5 mg isithako esisebenzayo, futhi zifakiwe njengoba izingxenye ezengeziwe:
Microcrystalline cellulose silicon.
Low-ukufaka endaweni cellulose hydroxypropyl.
Amaconsi akhiqizwa izitsha eziyisikhombisa 20 ml, kanye amaphilisi - kwisitaki lwezinto 7-14.
isinyathelo kwemithi kanye pharmacodynamics
Ngokusho impahla yayo ezihlobene imithi izidakamizwa antihistamine. Isakhi esiyinhloko esebenzayo, lapho kubhekwa "Alerzin" (amathonsi), incwadi yeziyalezo echaza kokubili uyakwazi ekuvimbeni histamine receptor.
Imiphumela izidakamizwa sibonga kungenzeka:
Ukuncishiswa permeability semithambo.
Ukuncishiswa eosinophil ukufuduka.
Okuvumelekile ukukhululwa kwe balamuli ukuvuvukala.
Ingqikithi asebenzayo ekulungisweni ayivumeli ukuthuthukiswa komzimba nezinto ngenxa yokuthi it has Izakhiwo ezilandelayo:
Umuthi vnutrprivodit ukuba ukumuncwa yayo okusheshayo emgudwini wegazi, futhi le nqubo cishe ezimele ukudla. I bioavailability zomuthi 100%.
Ukuphumelela kuboniswa kwezinye iziguli emva kwemizuzu 12-15 emva abaphathi, iningi - in ngesigamu sehora noma ihora. ulwazi olungenaphutha ngemithi ukusatshalaliswa ndaba ayitholakali izicubu zomzimba.
Ngokulinganiswa kusho "Alerzin" manual iqukethe ulwazi izinkomba ukusetshenziswa. Ngokuvamile, kutuswa kwalezi zimo:
Ukwelapha izimpawu ezigulini uhlushwa ezingamahlalakhona urticaria idiopathic.
Njengoba umuthi yawo rhinitis kubangelwa izinto ezixabana nomzimba.
Iziqondiso Kuyinto encane, ngokolwazi ukuthi ibika ukuthi "Alerzin" kusho umyalelo. Izimpendulo ngaye zinhle ngokwanele, uma ulandela zonke izincomo udokotela ukuze zisetshenziswe.
Ubani akufanele bathathe 'Alerzin "
Kungakhathaliseki ukuthi kuhle kangakanani ukulungiselela kwakuwukuhlambalaza nakanjani contraindicated. I "Alerzina" zingabantu:
Musa thatha imithi in iziguli ezinzima nesifo sezinso.
Ngesikhathi abesifazane ukuncelisa hhayi linqume izidakamizwa.
Uma kukhona isici esiyingqayizivele yezingxenye izidakamizwa.
Ephambi kwezinduna ukuntula-lactose.
Kube galactose ukungabekezelelani noma ukushayisana inqubo nokwenziwa glucose ne-galactose, kodwa lokhu kwenzeka kuphela kubantu ifomu tablet.
ngokuqapha ethile esibonise lapho ekhipha ukuba iziguli esezikhulile.
Banikezwe uhlobo oluhlukile ukukhululwa zomuthi, umthamo kanye nokwelashwa lwemithi bathi ngeke ifane. Le mininingwane kumele ihlolwe nodokotela wakho.
Uma usukhishwa esibhedlela "Alerzin" (amathonsi), isitatimende incoma luwathathe ngaphakathi, singabali ukudla. Umuthi ingagxila kokubili ifomu okumsulwa noma buhlanjululwe ngamanzi. Ungagcini amathonsi buhlanjululwe, kufanele kudliwe ngokushesha.
Isikali akhethiwe udokotela, kodwa ngokuvamile kuba 5 mg kanye nsuku zonke.
Uma ekhemisi uphiwa "Alerzin" (amaphilisi), isitatimende incoma luwathathe wonke ngamanzi. Isikali kubuye 5 mg noma 1 ithebhulethi ngosuku.
Ubude besikhathi sokwelashwa
Uma rhinitis iguliswa kwenzeka ngezikhathi futhi Uthatha izinsukwana 4 izinyanga, "Alerzinom" Ukwelapha ngempela uyavumelana ne izici nesenzakalo isifo. Ngokuvamile, lapho ukunyamalala izimpawu zingadanjiswa ukuyeka, futhi lapho kwenzeka - futhi ukuqhubeka.
Uma rhinitis iguliswa isikhathi esingaphezu kwenyanga ngenxa ukuchayeka njalo allergen, ukwelashwa kungase kube phakade. Ngo urticaria ezingamahlalakhona kanye nokwelashwa rhinitis "Alerzinom" ingahlala esingangonyaka.
imiphumela emibi izidakamizwa
Akubona bonke iziguli ukubekezelela ukuchayeka izidakamizwa. Umuntu ngamunye uhlukile, ngakho ungalindela ezinye imiphumela engathandeki, okungase kuthinte isitho izinhlelo eziningi:
1. On the ingxenye umgudu wokuphefumula zingavela iphika.
2. isimiso sezinzwa angaphendula zimpawu ezilandelayo:
Isiyezi, kuze ekuqulekeni.
Ngamaphupho nje la.
3. Ngo ingxenye esimiso senhliziyo nemithambo yegazi kungabonakala nasemkhakheni palpitations inhliziyo futhi tachycardia.
4. uhlelo urinary sizobonisa ukungasebenzi yayo njengoba nokugcinwa urinary, dysuria.
5. Kungenzeka kube ukungakhuli.
6. Kwemizwelo yokusetshenziswa pheshana emathunjini ezifana isicanucanu, uhudo, ukuqunjelwa, ukoma ku ngalo ingaphakathi ngomlomo, i-hepatitis.
8. Isikhumba zingavela amawala, ukulunywa ukukhathazeka, kwezinye izimo - angioedema.
9. Ngezikhathi ezithile kungase kube ukuvuvukala, isifiso sokudla kakhulu, isisindo somzimba.
Ngezinye okuvela iyiphi ukubonakaliswa engathandeki ngesikhathi yokwelapha "Alerzinom" kufanele ubone udokotela futhi uxoxe naye okunye ukwelashwa.
Reception ebulilini izidakamizwa
Abanye ngephutha sikholelwe ukuthi sokuphuza isilinganiso esengeziwe somuthi anda ngokushesha uyoba nomphumela omuhle nangaphezulu kwesilinganiso yokwamukela izidakamizwa. Lokhu kuholela ukweqisa izidakamizwa we ketshezi esebenzayo emzimbeni kungabangela:
Zonke lezi zimpawu kuzoncika inani izidakamizwa kuthathwe okweqa kuyinsakavukela. Endabeni ka ukweqisa izidakamizwa, kumelwe ususe esiswini, bese ukuqeda avele izimpawu.
Sibuyuyekeze lesi sidakamizwa "Alerzin" imfundo, inani kwamukeleka ngempela, kodwa kuyadingeka ngaphambi kokufaka isicelo ukuxoxa nodokotela wakho izidakamizwa inhlanganisela nezinye izidakamizwa, uma usebenzisa lezo.
ukuhlolwa laboratory eside batholé ukuthi co-isimiso sokuqondisa 'Alerzina "futhi" ilangabi retardants "," glipizide "," Erythromycin "," Diazepam "akukuniki imiphumela emibi.
Uma hlanganisa izidakamizwa kanye nokwelashwa "ritonavir" ke ukusatshalaliswa kohlelo yokugcina emzimbeni kuyehla 10-12%.
Ukusetshenziswa ahlangene we "theophylline" kunciphisa imvume levocetirizine, kodwa kinetics ka "theophylline" akashintshi. Phakathi ukwelashwa "Alerzinom" ethola sedatives is hhayi Kunconywa, nakuba nasekuqiniseni imiphumela yabo kungukuthi ebonwe ukusetshenziswa ngemithamo zokwelapha.
Ezinye izinkomba ngesikhatsi ukwelashwa "Alerzinom"
Doctor phambi ukwabela noma yimuphi umuthi, kumele afeze ahlolwe kahle emzimbeni wesiguli. Lokhu kusebenza futhi izindlela ephephile kakhulu, okuyinto akunakubangelwa "Alerzin". Ephambi kwezinduna izifo concomitant futhi umthamo lwemithi kumele kushintshwe.
Ngokucophelela thatha izidakamizwa unikwe iziguli pathologies kohlelo excretory, ikakhulukazi iziguli esezikhulile okungamahlala ukwehluleka kwezinso.
Isebenza kuhle nxa nesineke umgogodla cord yokulimala, wendlala adenoma kudingekile ukulungisa umthamo izidakamizwa, ngoba ingabangela nokugcinwa urinary.
Ezinye izingxenye "Alerzina" kungaba baxabane nomzimba, ukuze iziguli ezifweni ngokweqile ukuze ezahlukahlukene ukuze kubhekwe ekwelapheni ngokuqapha.
Ukusebenzisa izidakamizwa ezinganeni
Isetshenziselwa ukwelashwa rhinitis iguliswa futhi urticaria ezinganeni kufanele kube kuphela emva kokubonisana udokotela "Alerzin". Imiyalelo izingane alikukhuthazi uyisebenzisa ukwelapha izingane ngaphansi kwezinyanga ezingu-6.
Isikali lehla kuzoya ngeminyaka ingane:
izinyanga 6 kuya 12 zingafundwa kanye ngosuku 5 amaconsi izidakamizwa.
Kusukela eminyakeni 1 ngonyaka 6 "Alerzin" (lehla) umyalelo izingane Kunconywa ukunikeza 5 amathonsi izikhathi 2 ngosuku.
Izingane abaneminyaka engama 6, umthamo 1 ml izikhathi 5 ngosuku.
Tablets izingane ezingaphansi kweminyaka 6 ubudala avinjelwa ngokuqinile. Ngemva kweminyaka engu-6 umthamo wansuku 5 mg, okuyinto 1 tablet.
Ukusetshenziswa "Alerzina" phakathi nokukhulelwa kanye lactation
Abesifazane sesimweni ezithakazelisayo cishe esimisiwe 'Alerzin "imfundo ayiqukethe amaqiniso kweqiniso mayelana ukuphepha levocetirizine sokuthuthukiswa umbungu.
Uma kukhona isidingo ngokuthatha izidakamizwa ngesikhathi ibele, kubalulekile ukuba ayeke.
I "Alerzina" kukhona inombolo ngokwanele enkulu kumakhophi, banayo nomphumela ofanayo zokwelapha, ngakho uma kukhona Izimo ukusebenzisa kwayo, kufanele uxoxe ngalokhu nodokotela wakho.
Phakathi analogue yilezi ezilandelayo:
Uma Izimo kuya "Alerzina" Cha, kufanele uxoxe nodokotela ukuthi ungakwazi ukushintsha Analogue yayo. Kwezinye izimo, kungcono ukusebenzisa izidakamizwa, esivele ihlolwe futhi nethonya elihle.
Kakade, kuxoxwa ngokuningiliziwe "Alerzin" (amathonsi), imfundo. Inani lentengo lomuthi incane (cishe ngo-330 ruble), ngakho iziguli eziningi abakwaziyo ukuthenga ke. Izibuyekezo ukwelashwa izidakamizwa idatha kwesinyathelo esiqondile alichaza ngokushesha, ukusetshenziswa lula kanye nekghono eliphezulu.
Ezinye iziguli abasebenzisa izidakamizwa ngezinye izikhathi, bathi omunye ethile - akusho ukuphila encane eshalofini ngemva kokuvula isitsha ne amathonsi.
Yokungezwani komzimba kuba ukubonakaliswa ngempela ezingemnandi, kusukela ofuna balahle ngokushesha. Emashalofini Pharmacy zigcwele antihistamine, kodwa kukhethwa izidakamizwa is kungcono ishiyelwe ochwepheshe hhayi self-medicate ke umphumela kuyoqinisekiswa.
Vitamin ukulungiselela 'Milgamma'. Imiyalelo. imijovo
Ingabe udinga umhlahlandlela izidakamizwa msebenzisi? "Kagocel" - ezilula eyinkimbinkimbi
Dimethindene maleate: Umhlahlandlela kanye nokubuyekeza
Amakhandlela Bheka "Bioprost": yokusetshenziswa, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Umuthi 'Ovestin ". Yokusetshenziswa
Kungani pancake etholwe iraba? Kunganjani vula pancake
Okokunandisa izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
EMpumalanga Ekude yeRussia. Umuzi Ekude yeRussia (uhlu)
Inkosi yokuqala eRussia - u-Ivan IV, ngokuthi "esibi"
Zheleznovodsk: izikhangibavakashi kanye zokungcebeleka
Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa inkwethu
Indaba Ngaba "Isosha Little", Platonov: Isifinyezo nokuhlaziya